अल्ट्रासोनिक्स: अनुप्रयोग र प्रक्रियाहरू - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिकेसन धेरै अनुप्रयोगहरूका लागि उपयोगी टेक्नोलोजी हो, जस्तै होमोजिनाइज गर्ने, बिच्छेदन गर्ने, फैलावट गर्ने, सोनोकेमिस्ट्री, डिगासिing वा सफाई गर्ने। तल, तपाइँ विशिष्ट अल्ट्रासोनिक अनुप्रयोग र प्रक्रियाहरू पाउनुहुनेछ।
प्रत्येक अनुप्रयोगमा अधिक जानकारीको लागि कृपया तलका सूचीका आईटमहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
विच्छेदन र डगगोलमोमेसन
गीली-मिलिंग र पीस
हट पानी विसर्जन
लीक पहिचान (बोतलहरू र क्याप्सन)
सफा (तार / पट्टी)
अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजरहरूले एकरूपता र फैलाव स्थिरता सुधार गर्न तरलमा साना कणहरू घटाउँछन्। कणहरू (फैलाउने चरण) तरल चरणमा निलम्बित तरल बूँदहरू हुन सक्छ। अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजेसन नरम र कडा कणहरूको घटाउनका लागि धेरै कुशल छ। हिल्सचरले कुनै तरल भोल्युमको समरूपका लागि र ब्याच वा इनलाइन प्रोसेसिंगको लागि अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू उत्पादन गर्दछ। प्रयोगशाला अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू लगभग १.mmL बाट खण्डहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 4L अल्ट्रासोनिक औद्योगिक उपकरणहरूले लगभग ०. 0.5 देखि ब्याचमा प्रक्रिया गर्न सक्दछ। 2000L वा प्रवाह दर 0.1L बाट 20 घन मिटर प्रति घण्टा प्रक्रिया विकास वा उत्पादन मा
अल्ट्रासोनिक homogenizing को बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक Dispersing र Deagglomeration
तरल पदार्थमा solids को फैलाउने र deagglomeration अल्ट्रासोनिक उपकरणहरु को एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हो। अल्ट्रासोनिक काभेटेशनले उच्च कतरनी शक्तिहरू उत्पन्न गर्दछ जसले कणहरूको समूहलाई व्यक्तिगत, एकल फैलाएको कणहरूमा विभाजित गर्दछ। तरल पदार्थमा पाउडरको मिश्रण विभिन्न उत्पादनहरू, जस्तै पेन्ट, शैम्पू, पेय पदार्थ, वा मिलिishing मिडिया को निर्माणको सामान्य चरण हो। व्यक्तिगत कणहरू विभिन्न शारीरिक र रासायनिक प्रकृतिको आकर्षण शक्तिहरू द्वारा भेला गरिन्छ, भ्यान-डेर-वाल्स-सेना र तरल सतह तनाव सहित। अल्ट्रासोनिकेसनले कणलाई डिग्लुमेरेट गर्न र तरल मिडियामा फैलाउन यी आकर्षण शक्तिहरूमा विजय प्राप्त गर्दछ। तरल पदार्थहरूमा पाउडरहरू फैलाउने र डिग्लुमेरेसनका लागि उच्च तीव्रता अल्ट्रासोनिकेसन उच्च दबावको होमोजिनाइजर्स, उच्च शियर मिक्सर वा रोटर-स्टेटर-मिक्सरहरूको लागि चाखलाग्दो विकल्प हो।
अल्ट्रासोनिक वितरण र deagglomeration को बारेमा थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
मध्यवर्ती र उपभोक्ता उत्पादनहरूको एक विस्तृत श्रृंखला, जस्तै सौंदर्य प्रसाधन र छाला लोशन, फार्मास्यूटिकल मलहम, वार्निश, रंग र स्नेहक र ईन्धन पूर्ण वा इमल्शन्सको अंशमा आधारित छन्। Emulsion दुई वा अधिक अमिल्दो तरल पदार्थको फैलावट हो। उच्च गहन अल्ट्रासाउन्ड एक दोस्रो चरण (निरन्तर चरण) मा सानो थोपामा एक तरल चरण (छितो चरण) फैलाउन पर्याप्त तीव्र कतरनी आपूर्ति गर्दछ। फैलाउने क्षेत्रमा, इनभ्लोडि c क्याभेसन बुलबुले वरिपरिको तरलमा गम्भीर आघात छालहरू उत्पन्न गर्दछ र परिणामस्वरूप उच्च तरल वेग (उच्च शियर) को तरल जेटहरूको गठन हुन्छ। अल्ट्रासोनिकेसनले १ माइक्रोन (माइक्रो-इमल्सन) मुनि एक सानो बूढी आकार राम्रोसँग प्राप्त गर्न सक्छ।
अल्ट्रासोनिक पायसीकरणको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक गीली-मिलिंग र पीस
गीला-मिलिंग र कणहरूको माइक्रो-पिसाईका लागि Ultrasonication एक कुशल साधन हो। विशेष गरी सुपरफाइन साइज स्लरी उत्पादनको लागि, अल्ट्रासाउन्डका धेरै फाइदाहरू छन्। यो परम्परागत आकार घटाउने उपकरणहरूसँग उत्कृष्ट छ, जस्तै: कोलोइड मिलहरू (जस्तै बल मिलहरू, मोती मिलहरू), डिस्क मिलहरू वा जेट मिलहरू। अल्ट्रासोनिकेसनले उच्च-सघनता र उच्च-चिपचिपापन स्लरीहरू प्रशोधन गर्न सक्छ - त्यसैले प्रशोधन हुन भोल्युम घटाउने। अल्ट्रासोनिक मिलिंग माइक्रोन-साइज र न्यानो-आकारका सामग्रीहरू जस्तै सिरामिक्स, पिग्मेन्ट्स, बेरियम सल्फेट, क्याल्सियम कार्बोनेट वा धातु अक्साइडहरू प्रशोधन गर्न उपयुक्त छ।
अल्ट्रासोनिक गीली मिलिंग र माइक्रो-पीसिंग बारे थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक सेल विघटन
अल्ट्रासोनिक उपचारले फाइबरस, सेल्युलोसिक सामग्रीलाई राम्रो कणहरूमा विभाजित गर्न र सेल संरचनाको भित्ताहरू भत्काउन सक्छ। यसले इन्टर सेलुलर सामग्री, जस्तै स्टार्च वा चिनीमा तरलमा निकाल्छ। यो प्रभाव किण्वन, पाचन र जैविक पदार्थको अन्य रूपान्तरण प्रक्रियाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मिलिंग र पिसाई पछि, अल्ट्रासोनिकेसनले अधिक स्ट्राउल सामग्री जस्तै स्टार्चको साथसाथै सेल भित्तेको मलबेहरू एन्जाइमहरूको लागि उपलब्ध हुन्छ जसले स्टार्चलाई शक्करमा रूपान्तरण गर्दछ। यसले तरल वा स्याकिरीफिकेसनको बखत इन्जाइमहरूको संपर्कमा रहेको सतह क्षेत्र पनि बढाउँदछ। यसले सामान्यतया खमीरको किण्वन र अन्य रूपान्तरण प्रक्रियाको गति र उत्पादन बढाउँदछ, जस्तै बायोमासबाट इथेनॉल उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न।
सेल संरचनाको अल्ट्रासोनिक विस्थापनको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक सेल निकासी
सेलहरू र सबसेलुलर कणहरूमा भण्डारित एन्जाइमहरू र प्रोटीनहरूको निकासी उच्च-तीव्रता अल्ट्रासाउन्डको व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको अनुप्रयोग हो। बोटबिरुवा वा बीउ भित्र रहेको जैविक यौगिकहरूको घोलक निकासी महत्वपूर्ण सुधार गर्न सकिन्छ। सम्भावित बायोएक्टिभ कम्पोनेन्टहरूको उत्खनन र अलगावमा अल्ट्रासाउन्डको सम्भावित फाइदा छ, उदाहरणका लागि वर्तमान प्रक्रियाहरूमा गठन गरिएको गैर-उपयोगद्वारा उत्पाद स्ट्रीमहरूबाट। अल्ट्रासोनिकेसन प्रयोगशाला र उत्पादन मा पैमानेमा वानस्पतिक निकासीको लागि एक धेरै प्रभावी प्रविधि हो।
अल्ट्रासोनिक सेल निकासी को बारे मा अधिक जानकारी को लागि यहां क्लिक गर्नुहोस!
तरलमा शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक काभेटेशन
प्रक्रिया विकास र अप्टिमाइजेसनको लागि १,००० वाट अल्ट्रासोनिक सेट
अल्ट्रासोनिक्स को सोनाकोमिकल अनुप्रयोग
Sonochemistry रासायनिक प्रतिक्रिया र प्रक्रियाहरूमा अल्ट्रासाउन्डको अनुप्रयोग हो। तरल पदार्थमा सोनोकेमिकल प्रभाव निम्त्याउने संयन्त्र ध्वनिक गुहिकापनको घटना हो। रासायनिक प्रतिक्रियाहरू र प्रक्रियाहरूमा सोनोकेमिकल प्रभावहरूमा प्रतिक्रिया गति वा आउटपुटमा वृद्धि, अधिक दक्ष उर्जा प्रयोग, चरण स्थानान्तरण उत्प्रेरकको प्रदर्शन सुधार, धातु र सॉलिडहरूको सक्रियता वा अभिकर्मक वा उत्प्रेरकको प्रतिक्रियामा वृद्धि समावेश छ।
अल्ट्रासाउन्डको सुनकोमिकल प्रभावको बारेमा थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक ट्रास्जिस्टरेशन ओयल देखि बायोडाइडल
अल्ट्रासोनिकेशनले रासायनिक प्रतिक्रिया गति बढाउँछ र बायोडीडेलमा वनस्पति तेल र पशु वसाको ट्रांजिस्टरेशनको उपज बढाउँछ। यसले ब्याच प्रक्रियाबाट निरन्तर प्रवाह प्रकृयामा उत्पादन परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ र यसले लगानी र परिचालन लागत घटाउँछ। वनस्पति तेल वा जनावर वसा बाट बायोडाइडल को निर्माण, माथानोल वा इथेनॉल संग मिथाइल एस्टर वा इथाइल एस्टर को लागि फसिड एसिड को आधार-उत्प्रेरित ट्रांजिस्टरेशन शामिल छ। अल्ट्रासोनिकेशनले 99% भन्दा बढी बायोडीडेल उपज प्राप्त गर्न सक्छ। अल्ट्रासाउन्ड प्रशोधनको समय कम हुन्छ र अलगावको समय निकै कम हुन्छ।
तेलको अल्ट्रासोनिक रूप देखि सहायताको ट्रांजिस्टरेशनको बारे थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
अल्ट्रासोनिक डेरिस्सिंग को तरल पदार्थ
तरल पदार्थ को डेरिअसिंग अल्ट्रासोनिक उपकरणों को एक दिलचस्प आवेदन हो। यस अवस्थामा अल्ट्रासाउन्डले तरलबाट सानो निलम्बित ग्याँस-बुलबुले हटाउँछ र प्राकृतिक संतुलन स्तरको तल भंग भएको ग्यासको स्तर घटाउँछ।
तरल पदार्थको अल्ट्रासोनिक डिससिंगको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
लीक को खोज को लागि बोतल र डिब्बे को Sonicationication
लीकका लागि क्यान र बोतलहरू जाँच गर्न तपाईं बोतलिंग र फिलिंग मेशिनहरूमा अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। कार्बन डाइअक्साइडको तत्काल रिलीज कार्बनयुक्त पेय पदार्थहरूले भरिएका कन्टेनरहरूको अल्ट्रासोनिक चुहावट परीक्षणहरूको निर्णायक प्रभाव हो।
अल्ट्रासोनिक रिसाव पत्ता लगाउने बारे थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
हट पानी प्रणालीको निरन्तर ड्रेसिङ
तातो पानी प्रणालीमा खतरनाक लेजिओनेला ब्याक्टेरियासँग लड्न र सुरक्षित स्नान वातावरण सुरक्षित गर्न ग्रुएनबेक कम्पनीले GENO ब्रेक प्रणाली विकास गरेको छ। यस प्रणालीले UV-C प्रकाशको संयोजनमा Hielscher अल्ट्रासोनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक मद्दत गरीएको डिफिगरेसनको बारेमा थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक वायर, केबल र पट्टी सफाई
अल्ट्रासोनिक सफाइ भनेको वातावरण र मैत्री विकल्प निरन्तर सामग्रीको सफाको लागि हो, जस्तै तार र केबल, टेप वा ट्यूबहरू। शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक काभेटेशनको प्रभावले चिकनाईको अवशेषहरू जस्तै तेल वा ग्रीस, साबुन, स्टेराटेस वा सामग्री सतहबाट धुलो हटाउँछ।
अल्ट्रासोनिक सफाईको बारेमा थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक अनुप्रयोगहरूको बारेमा अधिक जानकारीको लागि सोध्नुहोस्!
यदि तपाईंको उद्देश्य प्रक्रिया माथि सूचीबद्ध छैन भने, कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस्। हामीसँग धेरै अनुकूलित अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरू र समाधानहरू छन् जुन तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ।
अल्ट्रासोनिक प्रोसेसिंग को बारे मा सामान्य जानकारी
Ultrasonication एक पूर्ण व्यावसायिक प्रसंस्करण टेक्नोलोजी हो। उच्च विश्वसनीयता र स्केलेबिलिटी साथै कम मर्मत लागत र उच्च ऊर्जा दक्षताले अल्ट्रासोनिक उपकरणहरूलाई परम्परागत तरल प्रसंस्करण उपकरणहरूको लागि एक राम्रो विकल्प बनाउँदछ। अल्ट्रासाउन्डले थप रोमाञ्चक अवसरहरू प्रदान गर्दछ: काभेटेशन - आधारभूत अल्ट्रासोनिक प्रभाव - जैविक, रसायनिक र शारीरिक प्रक्रियाहरूमा अनुपम परिणामहरू उत्पादन गर्दछ।
जबकि कम-तीव्रता वा उच्च-आवृत्ति अल्ट्रासाउन्ड मुख्य रूपले विश्लेषण, गैर-विनाशकारी परीक्षण र इमेजिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ, उच्च-तीव्रता अल्ट्रासाउन्ड तरल पदार्थको प्रशोधनको लागि प्रयोग गर्दछ जस्तै मिक्सि,, इमल्सिफाइंग, तितरबितर र डिग्लुमेरेसन, सेल विच्छेदन वा एन्जाइम निष्क्रियता। उच्च तीव्रतामा तरल पदार्थ Sonicating जब, ध्वनि तरंगहरु तरल मिडिया मार्फत प्रसार। फ्रिक्वेन्सीको आधारमा दरहरूको साथ, यसले वैकल्पिक उच्च-दबाव (कम्प्रेसन) र कम दबाव (दुर्लभता) चक्रको परिणाम दिन्छ। कम-चक्र चक्रको बखत, उच्च-तीव्रता अल्ट्रासोनिक तरंगहरूले तरलमा सानो भ्याकुम बबलहरू वा voids सिर्जना गर्दछ। जब बुलबुले एक मात्रा प्राप्त गर्छन् जसमा उनीहरूले उप्रान्त ऊर्जा लिन सक्दैनन्, तिनीहरू उच्च-चक्रको क्रममा हिंस्रक ढल्छन्। यस घटनालाई काभेट भनिन्छ। प्रकोपको क्रममा धेरै उच्च तापक्रम (लगभग 5,000,००० के) र दबावहरू (लगभग २,००० मीटर) स्थानीय रूपमा पुगेको छ। काभिएसन बबलको प्रकोपले पनि प्रति सेकेन्ड वेग २0० मिटरसम्म तरल जेटहरूको परिणाम दिन्छ।
तरल पदार्थहरूमा अल्ट्रासोनिक काभेटेशनले द्रुत र पूर्ण डिगासिंगलाई निम्त्याउन सक्छ; नि: शुल्क रासायनिक आयनहरू (रेडिकल) उत्पन्न गरेर विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाहरू आरम्भ गर्नुहोस्; रासायनिक प्रतिक्रियाहरू द्रुत गर्नुहोस् रियन्ट्यान्टहरूको मिश्रणको सुविधा प्रदान गरेर; समग्र फैलाएर वा स्थायी रूपमा पोलिमरिक चेनमा रासायनिक बन्धन तोडेर पोलिमराइजेसन र Depolymeriization प्रतिक्रिया वृद्धि; पायसीकरण दर वृद्धि; प्रसार दरहरू सुधार गर्नुहोस्; अत्यधिक केन्द्रित पायस वा माइक्रोन आकार वा न्यानो आकार सामग्रीको वर्दी फैलाव उत्पादन; पशु, बोट, खमीर, वा जीवाणु कोशिकाबाट एन्जाइमहरू जस्ता पदार्थहरूको निकासी सहयोग; संक्रमित ऊतकबाट भाइरसहरू हटाउनुहोस्; र अन्तमा, सूक्ष्म जीवहरू सहित अतिसंवेदनशील कणहरू ईरोड र भाँच्नुहोस्। (क्लडिलक 2002)
उच्च-तीव्रता अल्ट्रासाउन्डले कम-चिसोपन तरल पदार्थहरूमा हिंसात्मक आन्दोलन उत्पन्न गर्दछ, जुन तरल पदार्थहरूमा सामग्री फैलाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। (एस्समिंगर, 1988) तरल / ठोस वा ग्याँस / ठोस अन्तर्राष्ट्रिय स्थानहरुमा, cavitation बुलबुले को asymmetric प्रत्यारोपण चर टरबुलेंस को कारण हुन सक्छ कि प्रसार सीमा परत को कम गर्न, संवहन मास हस्तांतरण को बढावा, र सामान्य मिश्रण संभव छ त सिस्टम मा प्रसार को गति को तेज गर्न सक्छ। (Nyborg, 1965)
UP200H / UP200S – ल्याबको लागि अल्ट्रासोनिक पावर
एन्स्मिन्जर, डे (१ 198 88): पानी निकाल्ने र सुकाउनेको ध्वनिक र इलेक्ट्रोअकौस्टिक विधिहरू, भित्र: ड्राईry टेक। ,,3473 (१ 198 88)
कुल्लिलोक, जे (2002): एन्जिमि गतिविधिमा अल्ट्रासाउन्ड, तापमान र दबाब उपचार को प्रभाव फल र सब्जी को रस को एक गुणवत्ता सूचक; पीएच.डी. टेक्निकी यूनिवर्सिटी बर्लिन (2002) मा थेसिस
नायबोर्ग, WL (१ 65 6565): ध्वनिक स्ट्रिमि,, भोल्यूम। २ बी, एकेडेमिक प्रेस, न्यूयोर्क (१ 65 6565)